Global Voices teny Malagasy » Atrikasa Rindrambaiko Newsframes · Global Voices teny Malagasy » Print
Atrikasa Rindrambaiko Newsframes
Voadika ny 10 Desambra 2017 5:35 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Amin'ny ankapobeny, fanadihadiana ifarimbonana ireo fampahalalam-baovao ny News Frames. Miasa miaraka amin'ny fomba famolavolana vaovao izahay, toy ny hoe: Nahoana ary amin'ny fomba ahoana no nandraketana ireo tantara sasany? Aiza ho aiza no misy fitanilàn'ny fampahalalam-baovao? Inona no dikan'ny hoe manoratra vaovao marina sy tsy mitanila?
Miaraka amin'ireo fanontaniana ireo ao an-tsaina, namorona ny Sehatra News Frames izahay, sehatra antserasera ifarimbonana izay ahitana tahiry, fitaovana fomba fiasa ary olona mikendry ny hahafantatra ny fomba hitantanana ny vaovao amin'ny sehatra fampahalalam-baovao, mamantatra ny mety hisian'ny fitanilàna amin'ny fitantaram-baovao sy ao amin'ny tenantsika ary mitrandraka ireo maodely vaovao sy mitondra zava-baovao mba hamokarana votoaty marina sy feno.
Tarihin'ny fomba fanadihadiana analitika (analytical methods) izy io ary hazavain'ny fotokevi-dehibe fampifandraisana ireo olona misara-toerana (na misara-kevitra) [fananganana tetezana] mampiavaka ny Global Voices. Manokatra fahafahana ho an'ny olona ho talanjona amin'ny tahiry sy ny fomba fijery marani-tsaina ananan'ny hafa ireo rehefa ampiarahana.
Ny sasany amin'ireo fitaovana ampiasainay dia ny Media Cloud, Bias Detector, Zotero, Check, ary Checklist. Ny sasany amin'ireo fomba fiasa noforoninay tamin'ny fampiasana ireo fitaovana ireo kosa dia ny Culture Shots, News Credible, Rising Frames, GV Mirror, ary ny Frame-spotting.
Singa manan-danja amin'ny fomba fiasanay ny fiarahamiasa.
Matoky ny ekipan'ny NewsFrame fa raha tena ilaina amin'ny lafiny maro ny fitaovana, dia mbola tsy mahafa-po tanteraka.
Ny olona ao ambadik'izany no mamelona azy ireo, ary matoky izahay fa ny fandraisana anjaran'ireo olona manana traikefa sy fahaizana manokana amin'ny sehatra maro dia afaka manampy anay hampiasa ireo fitaovana amin'ny fomba vaovao mba hahatakarana ny fomba fiasan'ny fitateram-baovao hatramin'izao, ary hijery fomba vaovao handrosoana hatrany sy hanaovana ny fanatsarana.
Mifandraisa aminay ao amin'ny newsframes@globalvoices.org  raha manana fanontaniana ianao na raha te handray anjara ianao, dia te-hihaino izay avy aminao izahay!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/10/111409/